High Altitude Pulmonary Edema (HAPE) को बिरामीको उपचार गर्दाको अनुभव: NSI Nick Simons Institute
High Altitude Pulmonary Edema (HAPE) को बिरामीको उपचार गर्दाको अनुभव
27 Aug, 2018 By: Chandra Dev Sharma
म २०७०/१२/९ गते बाग्लुङ्ग लोकसेवा आयोगबाट जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मुस्ताङ्गमा स्थायी नियुक्ति लिएपछि दुर्गम ठाउँ हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङ्गको उपल्लो र तल्लो मुस्ताङ्गको बीचमा अवस्थित हालको बाह्रगाँउ मुक्तिक्षेत्र गा.पा.३, छुसाङ्ग स्वास्थ्य चौकीमा हालसम्म नियमित रुपमा सेवा दिँदै आइरहेको छु । यो ठाउँ स्वदेशी र विदेशी पर्यटकको रुपमा समेत चिनिएको ठाउँ हो ।
यसरी नै सेवा दिने क्रममा २०७४/४/९ गते बेलुका ६ बजे एउटा बिरामीलाई एकजनाले बोकेर यस स्वास्थ्य चौकीमा ल्याइयो । त्यो पुरुष बिरामी वर्ष ३५ को जिल्ला संखुवासभा, गा.पा. चैनपुर २ बस्ने बेनी देखी कोरेला नाका सम्मको बाटोको पेटी ठेकेदार थियो । निजको ठेक्का उपल्लो मुस्ताङ्गमा परेको थियो । हामीहरु स्वास्थ्य चौकी भित्र बस्ने भएकोले २४ घण्टा ओ.पि.डि. तथा आकस्मिक सेवा दिंदै आइरहेका छौ । निज बिरामीलाई ओ.पि.डि. बेडमा राख्न लगाएँ र चेक जाँचको क्रममा निम्न प्रकारका लक्षण र चिन्ह देखिएको थियो ।
♦ साँस फेर्न गाह्रो हुने र स्वाँ–स्वाँ गर्ने ।
♦ थकान महसुस गर्ने र हिँड्न गाह्रो हुने ।
♦ खोकी लाग्ने र अलि अलि खकारमा रगत मिसिएको समेत शिकायत ग-यो ।
♦ जिब्रो, ओठ र नङ्ग निलो भएको थियो ।
♦ साँस दर बढेको र छाती घ्यार–घ्यार गरेको आवाज सुनिनु ।
♦ राती निन्द्रा कम लाग्ने ।
♦ रक्तचाप १६०/१३० mm of Hg
Provisional Diagnosis गर्दा मेरो विचारमा High Altitude Pulmonary Edema (HAPE) भएको शंका लाग्यो । यस्तो दुर्गम ठाउँमा खासै उपचार नभएकोले मैले उनलाई जति सक्दो छिटो तल झर्नु भनें । तर रातिको समयमा कहाँ जाने, फेरी जोमसोम गाडी सिधै जाँदैन थियो किनकी कागबेनीको खोला र पाण्डा खोलामा पानी बढेर तर्ने अवस्था थिएन । त्यसैले जे हुन्छ रातभरी मलाई बचाई दिनुस्, भोलि जसरी भए पनि जान्छु भनेर उनले भनेपछि मैले उहाँको उपचार शुरु गरे । हामीहरुलाई HAPE सम्बन्धी २ दिने तालिम जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय जोमसोमले दिएको थियो । त्यही जानकारीको आधारमा मैले उहाँको उपचार शुरु गरेको थिएँ ।
बिरामीलाई न्यानो कपडा दिएर बेडमा सुत्न लगाए । IV line open गरी NS-500 ml शुरु गरें ।
♦ अक्सिजन लगाएँ (एकजना अमेरिकी युवाले उपलब्ध गराएका थिए) ।
♦ Inj - Gentamycin - 80 mg x IV x BD
♦ Inj - Dexamethason - 8 mg x IV x BD
♦ Inj - Ranitidin - IV Drip x BD
♦ Tab - Dimox (Acetazolamid) - 250 mg x PO x TDS
यतिको उपचार शुरु गर्दा बिरामीले अलि सञ्चो अनुभव गरेछ । बिरामीको साथि भने राती बस्न नमानेर एक्लै छोडेर चैले गाउँ गयो । अब के गर्ने त यस्तो बिरामीलाई एक्लै छोड्नु हुँदैन जे पनि हुनसक्छ । त्यसैले म बिरामी बेडको नजिक कुर्सिमा बसी रातभरी नसुति बिरामीको उपचार र रेखदेख गरे । त्यसपछि उहाँको साथीलाई बोलाएर बिहान ९ बजेको गाडीमा जोमसोम जिल्ला अस्पताल पठाएँ र त्यहाँ पनि उपचार सम्भव हुन नसक्ने भएकोले हवाईजहाजमा पोखरा पठाईदियो । यस्तो दुर्गम ठाउँमा उपचार गरी मान्छेलाई बचाउँदा त खुशी लाग्यो । अहिले उहाँ घरमा राम्रोसँग स्वस्थ जीवनयापन गर्दैछ ।
छुसाङ्ग स्वास्थ्य चौकी, मुस्ताङ्ग